Sayenzi chiratidzo icho chinangwa chinogadzirisa chinhu - Afrikhepri Fondation
kugashira SAYENYERI NEMISSTERI
Sainzi chiratidzo chekuti chinangwa chinoshandura chinhu
LVanamazvikokota vanhasi vakanganwa zvese nezvemhedzisiro yemunhu anoona. Ivo chete kwezvokufuka dzavo equations uye kutarisira yavanovimba achabudirira muna kwetunhu dzinopikisana zvose Zvakawanikwa izvi kuwanikwa mamwe kukura kudarika avo kuti vanhu kuziva, kana kuti idzidziso pamusoro vabatane dzidziso zvose, mune imwe pfungwa huru.
Pane makore anenge makumi matatu, apo vamwe masayendisiti mechanically mberi basa rake pasina kunzwisisa, boka duku kupayona masayendisiti kubva nomukurumbira mumayunivhesiti kupota nyika akambomira kuongorora dzisiri zvinorehwa iko kududzirwa kweCopenhagen nemigumisiro yeanotarisa.
Kana nyaya yacho isingashanduki, uye kana ichi chivo ichiita kuti chigamuchire chero chimiro, zvino zvinoratidzika sokuti kuziva kunogonawo kuunza zvinhu kutora chinangwa chaicho.
Kuongorora kwavo kwakaguma nemubvunzo wakajeka:
Kana kuisa pfungwa kune chimwe chinhu chinoshandura nyaya yepanyama, chii chinogona kuva nemigumisiro yechinangwa? Chii chinoitika kana tikaedza nemaune kuunza shanduko? Mukubatana kwedu sevatariri venyika yakawanda, isu hatigoni kungosika bedzi, asiwo tinokurudzira.
Aya masayendisiti akaedza kugadzira uye kuedza kuedza kuedza izvo zvavakadana "kure kure-kutungamirirwa mupfungwa" kana "psychokinesis," kana, zvinongoreva, "chinangwa" kana kuti kunyange "chinangwa".
Mune chirevo chechiGiriki tsanangudzo yechinangwa, iyo yekupedzisira ichave yakaratidzwa se "Chirongwa chekufunga kuita chimwe chinhu, icho chinotungamirira kumugumo unodaKusiyana nechido, izvo zvinongoreva kuti tinoda imwe chigumisiro, tisati taita chirongwa chaicho chokuchiwana.
Chinangwa chinotungamirirwa kune zviito zveiye amene anozvitaura; inoda maitiro ekufunga, pamwe nekuzvipira kuita chinhu chakanaka. Chinangwa chinoreva kuti kune chinangwa uye kuti tinonzwisisa kukosha kwechirongwa chekuita kuti tibatsire chinangwa chakatarisirwa.
Marilyn Schlitz, vedzidhendi wekutsvakurudza uye dzidzo paInited of Noetic Sciences, uye mumwe wevasayendisiti vaibatanidzwa mukutanga-kuongororwa kwemaitiro akakura, akatsanangura chinangwa se "chirevo chekuziva, nemaune uye zvakajeka, kuzadzisa chinangwa chakanaka kana chigumisiro ". Kuti atungamirire nyaya yepanyama, vaidavira, muedzo wacho aifanira kunge ane chikonzero chikuru, uye pfungwa yake, yakanyanyisa.
In dzinotevedzana kuedza zvinoshamisa, masayendisiti akaratidza kuti ane zvimwe rinotungamirirwa pfungwa anogona kukonzera ine zvainoita muviri, pane zvinhu zvisina upenyu uye zvinenge siyana zvipenyu, kubva unicellular zvinenge kuti vanhu.
Maviri zvikuru mukufambisira subgroup ichi tuduku vaiva Robert Jahn, aimbova wedhipatimendi murabhoritari engineering fakaroti Princeton Engineering Anomalies Research Lab (peya) pa Princeton University, uye bhururu wake Brenda Dunne, uyo pamwe chete akasika chirongwa tsvakurudzo yakagadzirwa maererano nesayenzi yakanaka.
Kwemakore makumi maviri nemashanu, Jahn naDunne vakatungamira izvo zvakazova basa guru renyika dzakawanda kuti rienzanise izvo zvinonzi "micro psychokinesis," zvinoitwa nemafungiro pane nhamba dzisina kuwanda dzinogadzira elektroniki yakaenzana nemari yakapfurwa.
Dhiyabhorosi yakabudiswa nemichina iyi (mabheteri uye makombiyuta zviso) yakarongedzwa nemafungiro akanaka uye akaipa kushandura pasina. Sezvo basa ravo rakanga risina kukwana, rakagadzira nhamba yakawanda kana isiri yakaenzana yezvikwata uye zviso, maererano nemitemo yezvingaita.
Izvo zvakanyanya kugadziriswa kwekuedza nejenereta aya yaiva miviri miviri inonakidza ichitsinhanisa pamakombiyuta-sekuti, cowboys nemaIndia.
Vatori vechikamu mune zvidzidzo izvi vakaiswa pamberi pemakombiyuta, uye vakabvunzwa kuti vedze kuchinja mishonga kuti vape kakawanda chimwe chezvifananidzo zviviri - taurai dzimwe cowboys - ipapo kuisa pfungwa dzavo kuitira kuti kuti vawane mifananidzo yakawanda yevaIndia, uye zvino vaifanira kuedza kusaita kuti mishonga ive nzira.
Mushure mekuedza miriyoni miviri nehafu miedzo yekuedza, Jahn naDunne vakaratidza zvakasimba izvozvo chinangwa chevanhu chinogona kukanganisa zvinhu izvi zvemagetsi mune zvakananga, uye migumisiro yavo yakange yakasununguka yakabudiswa nevamwe vatsvakurudzi ve68.
Kunyange zvazvo pearara yePAR yakaisa tsvakurudzo yayo pamusoro pemigumisiro yemafungiro emitambo uye zvinhu zvisina upenyu, mamwe akawanda masayendisiti akanga achiedza nemigumisiro yechinangwa chevanhu pamusoro pezvinhu zvipenyu.
Zvakawanda zvekutanga zvakawanikwa pakuziva zvakasvika makore anopfuura makumi matatu adarika. Zvimwe zvangobva kuwanikwa mufizikiki yakawanda uyewo mumakiti akawanda emahombekombe pasi pose zvinopa mhinduro dzemamwe emibvunzo iyi. Vanopa uchapupu hwokuti nyika yedu inonyangadza uye inotenderera kune chinogara chiripo, chinonyengera.
Kutsvakurudzwa kwemazuva ano kunoratidza kuti zvinhu zvisikwa zvinogara zvichiendesa uye zvinowana simba rinogona kuenzaniswa.
Zvitsva zvinyorwa zvinyorwa zvekuziva zvinounza iyo senhengo inogona kukwira pamarudzi ose emiganhu yepanyama. Chinangwa ichi chinoratidzika sechimwe chinhu chakafanana neforogo yekugadzira, zvichiita kuti mahwendefa ekugadzirisa ezvimwe zvinhu muzvinhu zvose aoneke panguva yakafanana.
Idzo zvidzidzo zvenguva pfupi nezvekuguma kwepfungwa panyaya dzinoratidzika kuratidza kuti chinangwa chave chakasiyana-siyana zvichienderana nehutano hwechinyorwa, uyewo kana achitaura pfungwa uye kupi nhema.
Chinangwa chacho chave chashandiswa mune dzimwe nzvimbo, kusanganisira kurapa zvirwere, kugadzirisa zvirongwa zvemuviri nekukurudzira zviitiko. Iyo haisi chipo chinokosha asi unyanzvi hwakadzidza uye nyore nyore kudzidzisa.
Ichokwadi, isu tose tashandisa chinangwa mune zvakawanda zvehupenyu hwedu hwezuva nezuva.
Zvose zvitsvakurudzo zvakaitwa zvinoratidzawo izvozvo simba rezvinangwa rinowedzerwa maererano nenhamba yevanhu panguva imwechete vachifunga chinhu chimwechete ....
chikamu SAYENYERI NEMISSTERI